Mpempe akwụkwọ Metal & Stamping Parts
Njirimara Nrụ Ọrụ Nrụgide
site na nchịkwa na 21-10-17
Okpomoku dị na ntụtụ ịgba ntụtụ adịghị akwụ ọtọ n'akụkụ dị iche iche, nke na -emetụtakwa oge oge okirikiri injection. Ọrụ nke igwe okpomọkụ ebu bụ idobe ọnọdụ okpomọkụ oge niile n'etiti 2min na 2max, nke pụtara igbochi okpomọkụ ...
Ubi Ngwa Mgba Ọgwụ
Ngwa ebu ihe eji arụ ọrụ bụ akụrụngwa dị mkpa maka imepụta ngwaahịa ụlọ ọrụ dị iche iche. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ plastik na nkwalite na itinye ngwaahịa plastik n'ime ụgbọ elu, ikuku, elektrọnik, igwe ...
Nlekọta Nlekọta CNC na Ọgwụ
Ngwa ntụtụ Ngwa ntụtụ bụ ngwaọrụ na -eme ka ihe ọkụkụ gbazee ihe resin wee tinye ya n'ime ebu. Dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ, a na -esi na isi ihe ahụ na -afanye resin n'ime gbọmgbọm ahụ, a na -ebuga agbaze ahụ na njedebe nke…
CNC machining na Ọgwụ akpụzi 4
Usoro mpịachi thermostat nke ịkpụzi injection Iji mezuo ihe achọrọ maka usoro ntụtụ na okpomoku ebu, a chọrọ usoro nhazi ọnọdụ okpomọkụ iji hazie okpomoku ebu. Maka injection ebu maka thermoplastics, a jụrụ usoro bụ mai ...
CNC machining na Ọgwụ akpụzi 3
Ọnụ ụzọ ịkpụzi ntụtụ Ọ bụ ọwa na -ejikọ isi ọsọ (ma ọ bụ onye na -agba ọsọ alaka) na oghere. Mpaghara akụkụ nke ọwa nwere ike ịha ọwa ọwa mmiri (ma ọ bụ ọwa alaka), mana a na-ebelatakarị ya. Yabụ na ọ bụ mpaghara pere mpe nke a ...
CNC machining na Ọgwụ akpụzi 2
N'ime usoro nrụpụta na ịkpụzi injection, ọ bụ sistemụ agbakwunyere, nke enweghị ike ikewapụ ya. Na ịkpụzi injection, sistemụ gating na -ezo aka na akụkụ nke onye na -agba ọsọ tupu plastik abanye n'ime oghere site na nozulu, gụnyere isi runne ...
CNC machining na Ọgwụ akpụzi
N'ime usoro nrụpụta igwe, ịkpụzi injection bụ ngwa maka imepụta ngwaahịa plastik; Ọ bụkwa ngwa ọrụ na -enye plastik nhazi zuru oke na nha ya. Ịkpụzi ntụtụ bụ usoro nhazi a na -eji emepụta oke akụkụ ụfọdụ dị mgbagwoju anya. Sp ...
Nkenke CNC machining na kwekọrọ Parts
N'ime usoro nrụpụta igwe, mgbanwe ọ bụla n'ụdị, nha, ọnọdụ na ọdịdị nke ihe na-emepụta, nke mere na ọ bụrụ ngwaahịa emechara ma ọ bụ usoro ngwaahịa emechara ọkara ka a na-akpọ usoro nhazi igwe. Enwere ike kewaa usoro nhazi n'ime nkedo ...
Usoro nhazi CNC
Usoro nhazi CNC Ndị na -arụ ụdị igwe dị iche iche ga -enwerịrị ọzụzụ ọrụ nchekwa wee gafere ule tupu ha ewere ọkwa. Tupu arụ ọrụ Tupu arụ ọrụ, jiri ngwa nchedo stric ...
Ihe dị maka CNC machining
Ihe ejiri eme igwe anaghị agba nchara SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C, wdg. Steel Q235 20# 45#, wdg Brass C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HP6 58) C27200 (CuzN37), wdg Iron 1213 , 1214, 1215, wdg Bronze C51000, C52100, C5400, wdg Aluminium Al606 ...
Igwe CNC na BMT na -eto nke ọma
Iji kwado mmemme mmepe ngwaahịa, na BMT anyị nwere ikike nrụpụta CNC zuru oke. Anyị na-eji igwe igwe CNC dị elu, lathes, EDMs, na igwe nri iji mepụta nnabata, akụkụ dị elu na nnyefe zuru ụwa ọnụ n'ime ihe dị ka ụbọchị iri. Anyị na onye bụbu ...
Ihe chọrọ nnabata
(1) Ndidi nke ọdịdị enweghị nkọwa kwesịrị imezu ihe GB1184-80 chọrọ. (2) Nwepu nke ekweghị n'ogologo enweghị nkọwa bụ ± 0.5mm. (3) Mpaghara ndidi nke mgbatị ahụ bụ ihe jikọrọ ya na nhazi nha nke oghere nke oghere. ...
Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akụkụ Ngwa CNC, Akara akpaghị aka, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Ngwa nhazi,